Taageerayaasha tuuteysan ee Col. Yuusuf iyo Prof. Geeddi ee loogu magac daray ciidada xoogga dalka oo la filayo in ay hub uruurin ka billaabaan berrito oo Sabti ah koofunta magaalada Muqdisho ---- Kooda loogu yeero contact group oo maanta shir ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya ------ Madaxweynaha Kenya oo ugu baaqay madaxweynayaasha IGAD iyo ay kulan deg deg ah ku yeeshaan Nayroobi, ---- iyo Prof. Caddow iyo Enj. Aftooje oo u dhoofay shalay Qaahira kadib markii uu Mareykanku gacan ku siiyay. Ruunkinet 05/01/07
Maleeshiyada taagersan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'isul wasaare Geeddi ayaa la filayaa in ay maanta hub uruurin ka billaabaan koofunta magaalada Muqdisho oo ay awood badan ku leeyihiin taageerayaasha Xuseen Caydiid, Cabdi Waal iyo Maxamed Qanyare.
Sida uu sheegay ra'isul wasaare Geeddi ayaa waxaa dhamaaday xalay saq dhexe xilligii uu u qabtay in dadka ku nool magaalada Muqdisho hubka looga dhigo.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in durbaba ay ku heshiiyeen taageerayaasha tuuteysan ee kala taageersan Prof. Geeddi iyo Col. Cabdullahi Yuusuf sida ay u qeybsanayaan hubka la doonaya in laga soo uruunaya koonfuta Muqdisho iyo Shabeelada Hoose inkastoo ay waxgarad ka tirsan beelaha USC ay kula taliyeen Prof. Geeddi in gobollada dalka isku mar laga dhigo hubka sharci darrada ah.
Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Prof. Geeddi ayaa la sheegay in ay doonayaan in hobka laga dhigo shacabka ku nool Xamar iyo Shabeelada Hoose inta ay ciidamada Itoobiya awoodda ku leeyihiin goobahaasi.
Dhanka kale, waxaa la filayaa in maanta ay ku shiraan magaalada Nayroobi kooxda loo yaqaan Contact Group si ay uga wada hadlaan arrimaha Soomaaliya.
Contact Group ayaa waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka qaar ka tirsan EU-da iyo dowlada kale oo daneeya arrimaha Soomaliya.
Sidoo kale, madaxweynaha dalka Kenya ayaa ugu baaqay madaxweynayaasha dalalka IGAD in ay isugu yimaadaan shir deg deg ah dalka Kenya si looga wada hadlo arrimaha Soomaaliya.
Dhanka kale, waxaa maanta ka duulay magaalada Nayroobi ayagoo ku sii jeeda magaalada Qaahira ee dalka Masar qaar ka tirsan guddiga fulinta iyo shuurada maxaakiimta islaamiyiinta ee ciidamada Itoobiya iyo kuwa taageersan madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi ay uga looga roonaadeen dagaalladii dhawaan ka dhacay koonfuta Soomaaliya.
Prof. Caddow oo ahaa xoghayaha arrimaha dibadda iyo Enj. Aftooje oo ahaa u qaabilsanaha arrimaha horumarinta maxaakiinta ayaa la sheegay in ay maanta ka dhoofeen dalka Kenya.
Labadan mas'uul oo ku sugnaa magaalada Nayroobi in muddo ah ayaa warar aan la xaqiijin sheegayaan in dibloomaasiyiin ka tirsan dowladda Mareykanka ee ku sugan magaalada Nayroobi ay gacan ka geyseen nabad gelyada mas'uuliyiintan oo wata dhalasho shisheeye.